Q & A – စာမကျြနှာ 116 – Healthy Life Journal
တုံ့ပြန်လွယ်သော အရေပြား (Sensitive Skin) ပိုင်ရှင်ဆိုသည်မှာ
ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် ပါမောက္ခ၊ အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ကြီး မြောက်ဥက္ကလာပ ဆေးရုံကြီး။ မေး. တုံ့ပြန်လွယ်တဲ့ အရေပြား (Sensitive Skin) ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲ ဆရာမ။ ဖြေ. အလှပြင်ပစ္စည်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သုံးရတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကို အရေပြားက ခံနိုင်ရည် နည်းသွားတာ...
သွေးထဲ ခရစ်ယာတင်နင်းဓာတ်များနေလျှင် . . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး ဒေါ်လှလှမေ၊ ပြည်။ မေး-. သွေးထဲ ခရစ်ယာတင်နင်းဓာတ် များနေရင် ဘယ်လိုအစာတွေကို စားသင့်ပါသလဲ၊ ဘယ်လို အစာတွေကို ရှောင်သင့်ပါသလဲ။ ဖြေ-သွေးထဲ ခရစ်ယာတင်နင်း ( Creatinine ) တက် နေသူတွေအနေနဲ့...
၀မ်းသွားပြီးတိုင်း ဗိုက်ရစ်နာနေလျှင် . .
ပါမောက္ခဦးကိုကို၊ ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေ ရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး မေး- ၀မ်းသွားပြီးရင် ဗိုက်က ရစ်ရစ်ပြီး နာနေပါတယ် ဆရာ၊ အဲဒါ ဘာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ အခု ဗိုက်နာနေတာ သက်သာအောင် ဘာလုပ်လို့ ရနိုင်မလဲ ဆရာ။ လှဝင်းရည်၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း။...
အရေပြားပေါ်က အလုံးဖုလေးတွေ . .
ဒေါက်တာမြတ်စန္ဒာကျော် ပါမောက္ခ၊ အရေပြားအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီး။ မေး. ကျွန်မအမေရဲ့ အရေပြားမှာ အလုံးဖုလေးတွေ ဖြစ်လို့ ဆရာဝန်ဆီသွားပြတာ Xanthoma အလုံးလို့ပြောပါတယ်။ အဲဒါက ကူးစက်တတ်ပါသလား၊ အမေက ကျွန်မတို့ကိုကူးမှာစိုးလို့ အနား အကပ်မခံလို့ပါရှင့်။ မြင့်မြင့်ဝေ၊ သာကေတ။ ဖြေ....
ဆီးချိုရှိရင် ချိုတဲ့ သစ်သီး စားနိုင်သလား . .
ပါမောက္ခဦးကိုကို (ဆီးချိုနှင့် အထွေထွေရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မေး . ကျွန်မ ဖေဖေက ဆီးချိုရောဂါရှိလို့ပါ ဆရာ။ သူက သစ်သီးတွေကြိုက်တော့ ကျွန်မသိချင်တာက ဆီးချိုရှိရင် ချိုတဲ့ သစ်သီးတွေကို စားလို့ရနိုင်ပါ့မလား ဆရာ။ ခိုင်ခိုင်၊ ညောင်ဦး။ ဖြေ .ဆီးချိုရောဂါ...
IUD ထည့်ပြီး ပျောက်သွားမှာ စိုးမိတယ်
ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး. ကျွန်မက အိမ်ထောင်သည်ပါဆရာ၊ ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်ကလေးမလိုချင်လို့တားချင်ပါတယ်။ အဲဒါဆေးသောက်၊ ဆေးထိုး မလုပ်ချင်လို့IUD ထည့်ရင် ကောင်းမလားလို့ပါဆရာ၊ ကျွန်မကြောက်တာက သားအိမ်ထဲထည့်ထား ရင်း အဲဒီIUD ပျောက်သွားမှာစိုးလို့ပါ။ အဲဒီလိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလားဆရာ။ ၀ါဝါ၊ ဘုရင့်နောင်။ ဖြေ....
ပထမကလေးကို ဗိုက်ခွဲမွေးပြီး ဘယ်လောက်ကြာရင် နောက်ကလေး မွေးလို့ရလဲ
မေး ပထမကလေးကို ဗိုက်ခွဲမွေးပြီး ဘယ်လောက်အကြာမှာ နောက်တစ်ကြိမ်ဗိုက်ခွဲပြီး ကလေးမွေး သင့်ပါသလဲ ဆရာ။ နီနီ၊ သာကေတ။ ဒေါက်တာစိုးလွင်(သားဖွားမီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. ခွဲစိတ်ထားတဲ့ မွေးလူနာတွေကို ဆရာတို့က ပြောလေ့ရှိတယ်။ အနည်းဆုံး တစ်နှစ်လောက်ကတော့ ကလေးမယူသင့်သေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့...
ဗောက်ကြောင့် ယားယံတဲ့ ပြဿ နာ
မေး ခေါင်းမှာ ဗောက်ထတာများလို့ စိတ်ညစ်ရပါတယ်။ ဗောက်ထတော့ ယားလို့ ကုတ်မိရာက ဆံပင်တွေပါ ကျွတ်နေလို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် ဗောက်ထတာ သက်သာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ရည်မွန်၊ တွံတေး။ ဖြေ. ဗောက်ဆိုတာ ဦးခေါင်းမှာ အဖြူရောင်၊ အ၀ါရောင်အကြေးခွံအဖတ်လေးတွေ မြင်ရတာကို...
သားဥအိမ်မှာ အရည်အိတ်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါရှိရင် ကလေးယူလို့ရနိုင်သလား
မေး သားဥအိမ်မှာအရည်အိတ်ဖြစ်တဲ့ရောဂါ (PCOS) ဖြစ်နေရင် ကလေးယူလို့ ရနိုင်ပါသလား ဆရာ။ Thazinhlaing ဒေါက်တာစိုးလွင် (သားဖွားမီးယပ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ PCOSဆိုတဲ့ Polycystic Ovary Syndrome ဆိုတာ သားဥအိမ်မှာ အရည်ကြည်အိတ် သေးသေးလေးတွေရှိနေတဲ့ အခြေအနေကို...
ဆေးခန်းမှာတိုင်းတဲ့ သွေးဖိအားနဲ့ အိမ်မှာတိုင်းတဲ့ သွေးဖိအား မတူတဲ့အခါ . .
မေး ကျွန်မအမေ ဆေးခန်းမှာ သွေးပေါင်ချိန်တော့ ၁၄၀/၉၀ mmHg ကျော်ပေမယ့် အိမ်မှာကျတော့ အဲဒီလောက် မများပါဘူး။ သွေးပေါင်က ဆေးခန်းမှာ တိုင်းတာနဲ့ အိမ်မှာတိုင်းတာ အပြောင်းအလဲရှိတော့ ဘယ်လိုအတိုင်းအတာဆိုရင် သွေးတိုးရှိတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ ...